Ohere a bịakwutere m site n'aka onye mmekọ Salesforce nke nwere aha pụtara ìhè maka itinye n'ọrụ, mmepe, na ijikọta nchịkọta nyiwe nke Salesforce maka ndị ahịa ha. Kemgbe ọtụtụ afọ, naanị ihe ha mere bụ ịpịpụ ya n'ogige ahụ… mana ha amalitela ịchọpụta ọdịiche dị na ụlọ ọrụ ahụ chọrọ jupụta - atụmatụ.
Mmejuputa Salesforce abughi ihe Atụmatụ ahia. Mmezu Salesforce nwere ike ịpụta ihe ọ bụla - site na otu ị si ere, onye ị na-erere, otu esi agwa ha okwu, otu ị si ejikọ ọnụ na nyiwe ụlọ ọrụ gị ndị ọzọ, yana otu ị si atụle ọganiihu. Inweta ikikere na izipu ezi uche na Salesforce abughi atumatu… o dika icho akwukwo egwu.
A marketing atụmatụ bụ atụmatụ egwuregwu azụmaahịa maka iru ndị mmadụ ma tụgharịa ha ka ha bụrụ ndị ahịa nke ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ nke azụmaahịa ahụ na-enye.
Ọ bụrụ na ị zụrụ a marketing atụmatụ site n'aka onye ndụmọdụ, gịnị ka ị ga-atụ anya ka ha bunye? Ajụrụ m ndị isi a dum ajụjụ a, ọ ga-eju gị anya na ọtụtụ azịza m natara… site n'echiche ruo na njedebe a na-egbu.
Ndi a hụrụ nzukọ ahụ n'oge ọkwa ọ bụla - site na nchọpụta nsogbu, nyocha nyocha, ihe achọrọ na nhọrọ nchịkọta ego, nzukọ ahụ nwere ike iru ọkwa ọ bụla na njem onye zụrụ ahịa? Ha nwere ngwaọrụ na akụrụngwa iji nyere aka mee ka nchọpụta nke onye zụrụ ahịa wee kwado ha aka?
Ozugbo emejuputara, olee otú a ga-atụle ihe ịga nke ọma na usoro ahia gi? Tupu ị mejuputa atumatu, a ga-atụle ikike ịtụle ya ka ị mara na ọ na-arụ ọrụ. Ogologo oge ole ka ị ga-eche tupu ị chọpụta otu ọ ga-esi mee nke ọma? Kedu oge ị ga - eji bulie mgbasa ozi gị? Kedu oge ị ga-agbakọ ha ma ọ bụrụ na ha anaghị arụ ọrụ?
Site na fintech ihe atụ dị n'elu, ụlọ ọrụ gị nwere ike chọpụta na saịtị ahụ na-efu maka mgbakọ ụlọ mgbarakwa ụlọ ka ị wee nwee atụmatụ ị wulite otu. Nke ahụ apụtaghị na atụmatụ ahụ na-akọwa ihe mgbako dị ka, otu ị ga - esi zụlite ya, ebe a ga - anabata ya, ma ọ bụ otu ị ga - esi kwalite ya… ndị a bụ usoro mkpọsa niile a ga - eme ụzọ. Usoro a bu iru ihe eji achoputa ndi gha acho iru ndi ahia. Mmejuputa na ogbugbu na-abịa mgbe e mesịrị.
Ka mụ na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-aga ahịa na Salesforce, anyị na-akụpụ ya n'ogige ahụ gbasara nkwa ndị a. Salesforce enyerela ndị ahịa aka ịghọta mkpa ọ dị maka teknụzụ iji nyere ha aka na ahịa na ahịa ha.
Onye ọrụ Salesforce nọ ebe ahụ iji nyere ha aka itinye usoro maka usoro na atụmatụ ha tụrụ anya ime. Ma m nọ n'etiti abụọ ịmata ọdịiche na-arụ ọrụ n'etiti nyiwe, ibe, na ndị ahịa ịzụlite plan iji ruo atụmanya ha na ndị ahịa ha. Mgbe enwere nkwekọrịta n'etiti anyị niile, onye ahịa Salesforce na-abata ma na-etinye ihe ngwọta ahụ, onye ahịa ahụ wee mezuo atụmatụ ahụ.